Umgibe kwimilayezo ebonakalayo ye-Gmail - Geofumed
Umgibe kwimilayezo ebonakalayo ye-Gmail
I-imeyile ifike kwi-akhawunti service.technique.messagerie@gmail.com kunye nesigidimi esifana nesibonayo ngezantsi okanye into efanayo.
1. Ekugqityweni kokugqibela kwe-Gmail® entsha ngokujonga ukhuseleko lwamalungu ethu enkonzo ye-Gmail® kwi-SPAMS, silindele ukuvalwa kwazo zonke ii-akhawunti ezingasetshenziswanga. Siya kunyanzelwa ukuba sivale i-akhawunti yakho ukuvumela u-decongestion wenethiwekhi yethu. Ukuqinisekisa ubungqina beli dilesi yakho ye-imeyile, gcwalisa ngokufanelekileyo ifom elandelayo, ngaphandle koko i-akhawunti yakho yeGmail® iya kugxothwa ngokusisigxina.
Idilesi yeenkonzo ze-Gmail:
* Igama kunye negama lokuQala:
* Izwe neSixeko:
2. Qinisekisa iphasiwedi kunye ne-Gmail® idilesi yeenkonzo zokuthumela imiyalezo ngokuthumela ulwazi oluceliwe ngokuphendula kulo myalezo ngexesha lee-72 iiyure. Emva kolu xesha, asiyi kukwazi ukuqinisekisa ulondolozo lwedilesi yakho yenkonzo ye-courier.
3. Esi sicelo siya kusivumela ukuba silungise idilesi yakho yenkonzo yokuthumela imiyalezo ukuze ungayilahleki ekuphelelweni kwenkonzo yokugqibela ye-Gmail®
4. Idatha yakho iya kuphathwa ngokuyimfihlo uze uqhubeke Gmail®. Yonke into entsha Gmail®, unako :
Yiba nemboniso ngokukhawuleza wemilayezo yakho kwipaneli yokufunda. Qulunqa kakuhle i-imeyile yakho ngokusebenzisa ukusebenza ukwenza isilayidi / ukubeka ii-imeyile eziqhelekileyo kwifayile yephupha. Bonisa ii-imeyile ezininzi ngelo xesha. Ngezigidi zeenkomo, idlula kwisigidimi esinye kwesinye. Fumana ii-imeyile zakho ezintsha ngokukhawuleza ngaphandle kokuba uhlaziye i-navigator yakho. Imeyili noMthunywa baqokelele: Xoxa ngokuhlala okanye nge-imeyile (ngokukhawuleza ikhona) kwaye rhoqo, ufikelela kwi-imeyile yakho nanini na xa ufuna, apho unayo yakho yeselula
Nangona kula maxesha ubuqhetseba sele sele besaziwa, kusekho abantu abangakwazi ukuwela kwisicupho ukubona i-akhawunti enjalo, ithoni okanye umbala we-html. Nangona kunjalo, nabani na onokuvula i-akhawunti ngelo gama, inani liya kuhlala liba ngu- @ gmail.com. Ukuxho mekeka kwethu ngoku kwi-imeyile kunye noko kugcinwe ngaphakathi kungasenza sibalekele impendulo kuba ixesha eliyithathayo iiyure ze-72.
Nangona umsebenzisi onamava kunye ne-Gmail unokufumana ubungqina obucacileyo, njengopelo olubi kunye nokuguqulela. Kodwa apha iingcebiso ezimbalwa xa kunjalo:
1. Sebenzisa ukuqonda Imigaqo ye-Gmail ithi awuyi kubuza iphasiwedi ngeposi, esisenza siqiniseke ukuba ngumgibe.
2. Jonga kwi-intanethi. Ngokubhala umhlathi kwi-injini yokukhangela, ngokuqinisekileyo umntu usele wenza umbuzo.
3. Bika ubusela besazisi. Oku akufanele kuthinte, kuba yindlela i-Gmail eya kuthintela ngayo umonakalo.
4. Hlola iinkcukacha. Xa ukhetha kwithebhu inketho "bonisa i-original", ungabona i-header apho i-imeyile ithunyelwe kuyo. Ngoku kunokwenzeka ukuba uthumele i-imeyile engekho kwi-akhawunti kwaye loo mntu uyithumele angayifumana ngaphandle kokuyifaka.
Ukuba uphendule ngephutha, into engxamisekileyo kukutshintsha iphasiwedi ngokukhawuleza. Hayi nje kuphela, kodwa nakwezinye iingxelo nangona usebenzisa iphasiwedi eyahlukileyo, kuba abahlali banomdla ekuboneni i-imeyile yakho, kodwa ukufikelela kwedatha kwezinye iinkonzo ezifana namakhadi-mboleko okanye i-Paypal. Oku ngaphandle kokuqokelela idatha yakho, unokufumana imali ngexesha elingaphantsi kunezinto ezithathayo ukucinga ngephasiwedi entsha.
Khangela oko ngaphambi kokuba umyalezo ubone ukuba i-akhawunti isetyenzisiwe nellycord1948.1.1@gmail.com njengenkonzo yokuphuma, kwaye enye enye nje i-alias ezihambelanayo. Emva koko kubonakala ukuba u-spammer wucaphukisa umba kwinqanaba leempawu ezixhamlayo, ngokokuba i-imeyile nganye iya kuthwala i-ID eyahlukileyo, umfundi ngamnye kufuneka abe ingxelo njengobhenyu besazisi. Omnye onokudala ugaxekile njengolu, unenqaku elifanayo elisebenza ngokuzenzekelayo kwimpendulo, ukweba idatha yezinye iinkonzo ngokuzenzekelayo kwaye ngaphandle kokushiya umkhondo.
I-Google kufuneka isele ibenzile ukuvimba iphethini esetyenzisiweyo, nangona ingaba ithathe imizuzu embalwa (okanye iiyure), ixesha elaneleyo kubantu abathile abangaboniyo ukuphendula kwi-imeyile. Ndiyazi ngenxa yokuba wafika kum ngaphandle kwesilumkiso sokuphanga.
Post edlulileyo«Edlulileyo Kuya kufuneka sitshintshe isikhumba
Post Next INSPIRE intuthuko eYurophuOkulandelayo "